#2 သင့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်သူဆုံးဖြတ်တာလဲ? | Mycanvas
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအာရုံစိုက်နေတာထက် အနာဂတ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်လာချင်တယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေရန်လိုပါတယ်။ လူတစ်ဦးချင်းစီမျှော်လင့်ထားတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်အတွက် မဟာဗျူဟာ (၃) ခုအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမယ်။ ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Step 2: သင်မျှော်လင့်ထားသောအနာဂတ်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ကူးမထားပါက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အနာဂတ်သည်လက်ရှိနေ့စဉ်ဘဝစီးဆင်းမှုရဲ့ရလဒ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းကိုရှောင်ရှားရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ တိကျသောရည်မှန်းချက်တစ်ခုထားရှိပြီး ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရန်အနာဂတ်ကိုစိတ်ကူးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့ဟာ အောင်မြင်ဖို့ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တိကျတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဟာ မြင်နိုင်သောရလဒ်များကိုပြနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ – လူတစ်ယောက်က စာရေးဆရာတစ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် သူဟာရောင်းအားသန်းချီရတဲ့စာအုပ်တွေကိုရေးသားတဲ့ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာတိကျသောရည်မှန်းချက်ထားရန်ဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာဖြစ်လာဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဟာ လက်ရှိကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်အားထက်သန်မှုရအောင်ဦးဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ရောသင့်အနာဂတ်မှာဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်လာချင်လဲ? ဘယ်လိုအောင်မြင်မှုတွေရချင်လဲ? သင့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုတခြားအသုံးပြုသူတွေနဲ့အတူမျှဝေဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်…